Blog of Nyein Chan Yar: 2007.09
Posted by Daythanix Chann at Thursday, September 27, 2007 13 comments:
Posted by Daythanix Chann at Thursday, September 27, 20072comments:
Posted by Daythanix Chann at Wednesday, September 26, 20072comments:
Posted by Daythanix Chann at Tuesday, September 25, 20073comments:
Posted by Daythanix Chann at Tuesday, September 25, 20072comments:
Posted by Daythanix Chann at Sunday, September 23, 20074comments:
Posted by Daythanix Chann at Thursday, September 20, 20075comments:
Posted by Daythanix Chann at Tuesday, September 18, 2007 No comments:
Posted by Daythanix Chann at Tuesday, September 18, 2007 1 comment:
ဟိုတစ်ပတ်က Gmail blog မှာဖတ်လိုက်ရတဲ့ post တစ်ခုက ကျွန်တော့်အတွက် တော်တော် အကျိုးရှိသွားတယ်။ သူရေးထားတဲ့နည်းက ကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်ထားလို့ ရောက်လာတဲ့ email (bacn) တွေကို Inbox ထဲကို ရောက်မလာစေပဲ label တစ်ခုတပ်ပြီး archive မှာသိမ်းပေးပါတယ်။ အဲတော့ ဒီemail တွေကို နောက်အားအားယားယား ရှိမှ သွားဖတ်မယ်၊ အခု inboxထဲ လာမရှုတ်နဲ့အုံး ဆိုတဲ့သဘောပေ့ါ။ အခု ဒါကို ဘယ်လိုလုတ်ရသလဲ ဆိုတာ Gmail blog ကရေးထားတာ အရင် ဖတ်ပေးပါ၊ ပြီးရင် ကျွန်တော်က mp3 attachment နဲ့ email တွေအတွက် နဲနဲ ထပ်ဖြည့်ပြောမယ်။
Excerpt from Gmail blog:
Create filters to put bacn in its place by clicking "CreateaFilter" next to the search buttons at the top of your inbox. First, tell Gmail what types of messages you'd like to filter. I typed "LinkedIn" in the "from" box and then clicked "Next step >>".
ကျွန်တော့် inbox ထဲမှာတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ mp3တွေ အများကြီးပဲ။ အဲတော့ mp3 attachment ပါတဲ့ mailတွေကို စုစုစည်းစည်း ဖြစ်ချင်တယ်။ အဲတော့ ဟိုတစ်ခါ ရေးဖူးတဲ့နည်းလေးနဲ့ တွဲသုံးလိုက်မယ်။ "Has the words:" မှာ filename:mp3 ဆိုတဲ့ query လေးသာရေးလိုက်ပါ။
Posted by Daythanix Chann at Tuesday, September 18, 20075comments:
Posted by Daythanix Chann at Sunday, September 16, 20073comments:
Posted by Daythanix Chann at Thursday, September 13, 20079comments: